အဆိုပါ HARD DISK ကို PARTITIONS ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - HARD DISK ကို - 2019
ID သို့မဟုတ် ID ကို - ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၌တစ်မူထူးခြားတဲ့ကုဒ်။ သင်မသိသော device ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေလျှင်, သင် device ကိုများ၏ ID ကိုသိပါလိမ့်မယ်သင်အလွယ်တကူအင်တာနက်ပေါ်ရှိကဒရိုင်ဘာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရဲ့ထိုသို့ပြုမှအတိအကျဘယ်လောက်မှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
ကျနော်တို့အမည်မသိ ID ကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုသင်ယူ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့ယာဉ်မောင်းများအတွက်ကြည့်ရှုမည်သည့်စက်ကို ID ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်အောက်ပါလုပျဆောငျရမညျ။
ကျနော်တို့ desktop ပေါ်မှာ icon ကိုကြည့်နေကြတယ် "My Computer ကို" (နောက်ပိုင်းတွင်ကို Windows7နဲ့သည်), သို့မဟုတ် "ဒီကွန်ပျူတာ" (Windows 8, 10) ။
ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် item ကို select "Properties ကို" ဆက်စပ် Menu ထဲမှာ။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, သင်လိုင်းကိုရှာဖွေရမယ် "Device Manager" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
မိမိကိုယျကိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်လှစ် "Device Manager"ဘယ်အမည်မသိ device ကိုပြသပါလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အမည်မသိစက်ကိရိယာနှင့်ဌာနခွဲကသင်တို့အဘို့အကြည့်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးဒါဖွင့်လှစ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဤစက်ကိရိယာတွင်, သငျသညျကို right-click နှိပ်ပြီးရွေးချယ်ရမည် "Properties ကို" menu ကိုချတစ်စက်ကနေ။
device ကိုဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ကျနော်တို့ tab ကိုသှားဖို့လိုအပျ "Information" ဆိုတဲ့။ drop-down menu မှာ "အိမ်ခြံမြေ" ကို select လုပ်ပါလိုင်း "ဟာ့ဒ်ဝဲ ID ကို"။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကထိပ်တန်းကနေတတိယဖြစ်ပါတယ်။
လယ်ပြင်၌ "value" သင်အဘို့ရှိသမျှကိုရွေးချယ်ထားသည့် device ကို ID ကိုများစာရင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ ဤအတန်ဖိုးများနှင့်အတူကျနော်တို့အလုပ်လုပ်သွားနေကြသည်။ မည်သည့်တန်ဖိုးကိုကော်ပီကူးခြင်းနှင့်ပေါ်ရွှေ့။
ကျနော်တို့ device ကို ID ကို၏ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေနေပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ် ID ကိုရှာတွေ့သည့်အခါနောက်ခြေလှမ်းကများအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုရှာကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအထူးပြုအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကို၏အကြီးဆုံးအနည်းငယ်မီးမောင်းထိုးပြ။
နည်းလမ်း 1: အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု DevID
ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အထိအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူက (သင်ထို site နီးပါး 47 သန်းယုံကြည်လျှင်) လူသိများ devices များဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်ဒေတာဘေ့စရှိပြီးအဆက်မပြတ်ထိုသူတို့အဘို့ drivers တွေကို update လုပ်။ ကျနော်တို့ device ကို ID ကိုသင်ယူခဲ့ကြပြီးတာနဲ့အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက် DevID အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုသွားပါ။
ကျနော်တို့ကိုချက်ချင်း site ၏အစအဦးမှာတည်ရှိပြီးဧရိယာလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တာရှည်ရှာစရာမလိုပါ။ ယခင်က device ကိုများ၏ ID တန်ဖိုးကိုရှာဖွေရေးလယ်သို့ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်ကူးယူ။ ထို့နောက်ခလုတ်ကိုတွန်း "ရှာရန်"လယ်တို့၌ရသောညာဘက်တည်ရှိသည်။
ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျဤစက်ကိရိယာများနှင့်တိုက်ရိုက်ယင်း၏မော်ဒယ်ယာဉ်မောင်း၏အောက်ပါစာရင်းမြင်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တပ်မက်လိုချင်သောအ operating system နဲ့စွမ်းရည်ကို select, အဲဒီနောက်ကားမောင်းသူကို select နှင့်ယာဉ်မောင်းများ၏ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်ညာဘက်တည်ရှိသော floppy disk ကို၏ပုံစံအတွက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်စတင်ရှေ့တော်၌ထိုနောက်စာမျက်နှာတွင်, သငျသညျနောကျတလိုင်းလုပ်ဖို့ check box ကိုကလစ်နှိပ် antikapchu ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "ကျွန်မနေတဲ့စက်ရုပ်မဟုတ်ဖြစ်၏"။ ဒီလယ်ကိုအောက်တွင်သင်ကားမောင်းသူ downloads, နှစ်ခုလင့်များမြင်လိမ့်မည်။ မူလ installation ဖိုင် - ဖိုင်ကိုယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ, ဒုတိယဖို့ပထမဦးဆုံးကိုကိုးကား။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအောင်ပြီးနောက်, link ကိုသူ့ဟာသူပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင် archive ကိုအတူ link ကိုရှေးခယျြလျှင်, download, ချက်ချင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျမူလ installation ဖိုင်ပိုနှစ်သက်လျှင်, သင်လိုအပ်ချက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားထုံးစံ antikapchu ကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမည်နှင့်ဖိုင်ကိုကိုယ်နှိုက်ဖို့ link ကို click နှိပ်ပြီးမှရှိရာလာမည့်စာမျက်နှာ, ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ အရာပြီးနောက်ကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်စတင်ပါလိမ့်မည်။
သင်က file ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ကြလျှင်ဒေါင်းလုဒ်ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်, သင်ကဖြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းယာဉ်မောင်းနှင့်အစီအစဉ်များဝန်ဆောင်မှု၏ DevID နဲ့ဖိုင်တွဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ folder တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ က Extract နှင့်ဖိုင်တွဲထဲမှာ installation ပရိုဂရမ်ကို run ပါ။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်စက်ကိရိယာနှင့်ကားမောင်းသူရဲ့ version ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်သောကွောငျ့, ယာဉ်မောင်း installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသူ့ကိုယ်သူဆေးထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကမည်သည့်ပြဿနာမျှလျှင်မူကား, မှတ်ချက်များအတွက်ရေးလိုက်ပါ။ ကူညီဖို့ရန်သေချာစေပါ။
နည်းလမ်း 2: အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု DevID DriverPack
အဆိုပါ DevID DriverPack ဝန်ဆောင်မှု site ကိုသွားပါ။
ဆိုက်ရဲ့ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်သော search box ထဲမှာ, ကိရိယာ ID ကို၏ကူးယူတန်ဖိုးကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, အလိုရှိသော operating system နဲ့စွမ်းရည်ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်ခလုတ်ကိုတွန်း « Enter » ကီးဘုတ်သို့မဟုတ်ခလုတ်ကို "ယာဉ်မောင်းကိုရှာပါ" အွန်လိုင်း။
အဲဒီနောကျသငျသညျသတ်မှတ် parameters တွေကိုကိုက်ညီတဲ့ကြောင်းယာဉ်မောင်းများ၏စာရင်းအောက်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ လက်ျာဘက်ရွေးချယ်ရာတွင်ပြီးနောက်သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ် "ဒေါင်းလုပ်".
ပြတင်းပေါက်လုံခြုံရေးသတိပေးနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်လျှင်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Run ကို".
ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုအလျှောက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအ device ကိုအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာအားလုံးကို drivers တွေကို install လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုမြင်ရပါလိမ့်မည်ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။ ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုကဒ်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်တိကျတဲ့ hardware အတွက် drivers တွေကိုရှာဖွေနေကြသည်ကတည်းကထို့နောက်ကို item ကို select "သာ Nvidia တို»များအတွက်ယာဉ်မောင်း Install.
တစ်ဦးက window ကိုယာဉ်မောင်း installation wizard ကိုနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်။ , ဆက်လက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ "Next ကို".
လာမယ့် window ထဲမှာ, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကို install ဖို့ဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, ဒီဝင်းဒိုးကိုအလိုအလျှောက်ပိတ်ပါမည်။
ပြီးစီးအပေါ်သို့, သင်သည်သင်၏ device ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းများ၏အောင်မြင်သောတပ်ဆင်ခပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူနောက်ဆုံး screen ကိုမြင်လိမ့်မည်။ သငျသညျပြီးသားလိုအပ်သော hardware အတွက်ယာဉ်မောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက, ဤစက်ကိရိယာများအတွက်အပ်ဒိတ်ကြောင်း software ကိုရေးမလိုအပ်ပါကြောင်းသတိပြုပါ။ တပ်ဆင်မယ့်ဖြည့်စွက်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ "ပြီးပြီ".
device ကို ID ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းဒေါင်းလုပ်ရသောအခါသတိထားပါ။ တစ်ဦးကားမောင်းသူကိုသင်၏အသွင်အောက်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် Third-party program ကို download လုပ်ပါရန်ကမ်းလှမ်းကြောင်းများစွာသောကွန်ယက်ကိုအရင်းအမြစ်များကိုပါ။
အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်ချင်တယ်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာ ID ကိုပေါ်မောင်းသူကိုရှာမတှေ့နိုငျကိရိယာ၏ ID ကိုရှာမတှေ့နိုငျလြှငျသငျအပေါငျးတို့သဒရိုင်ဘာကို update လုပ်ပြီး install များအတွက်ဘုံ tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, DriverPack Solution ။ DriverPack Solution ၏အကူအညီနှင့်အတူကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူရန်, သင်ကတိကျသောဆောင်းပါး၏အသေးစိတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Cómo cambiar la bomba de gasolina stratus 2000 diagnóstico y fallas comunes (သြဂုတ်လ 2019).